DHAGEYSO: Xaliimo Yareey oo shaaca ka qaaday warar la hadal hayay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Xaliimo Yareey oo shaaca ka qaaday warar la hadal hayay
DHAGEYSO: Xaliimo Yareey oo shaaca ka qaaday warar la hadal hayay
Muqdisho (Halqaran.com) – Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaranka, Xaliimo Yareey ayaa sheegtay in dad badan is-weedyiinayay maadaama doorasho la galaayo Guddigooda Shaqada ay qabanayaan, waxaana ay sheegtay in shaqadooda aysan aheyn mid dhamaata.
Xaliimo Yareey ayaa sheegay, in Shaqadooda ay tahay diiwaangelinta Xisbiyada, sidoo kalena aysan Shaqadooda hakan doonaan, balse kaliya ay ku joojin karaan haddii uu dalka Milateri la wareego oo wax walba meesha laga saaro.
Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaranka, xaliimo Yareey ayaa sidoo kale xustay, in shaqadooda ay tahay diyaarinta doorashooyin qof iyo Cod ah ee afti dadweyne, islamarkaana qorshahaas ay wadaan.
Ugu dambey, hadalka Xaliimo Yareey ayaa imaanaya, kadib heshiiskii doorasho ee dhawaan Muqdisho lagu gaaray laguna go’aamiyay in la Magacaabo guddiyo kale oo ka shaqeeya arrimaha doorashada, kuwaas oo la wareegaya shaqadii Guddiga Madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaranka.
Halka hoose ka dhageyso Codka Xaliimo Yareey:
doorasho cod iyo qof
warar la hadal hayay